YEMAHARA: F1 2017 nyika paGNU / Linux muna Mbudzi 2 | Linux Vakapindwa muropa
Feral Inopindirana inozviitazve, inounza zita repamusoro kubva pasirese remitambo yemavhidhiyo kuLinux uye inozviita nekutakura yakanakisa Fomula 1 simulator kubva kuCode Masters, iyo F1 2017. Saka kubva zvino zvichienda mberi tinogona kunakidzwa neyakanyanya F1 vhidhiyo mutambo zvakare paGNU / Linux uye ino inguva yekutanga kuitika. Saka kubva kuLxA, ndinoda kutenda Feral, uyo ari kuita basa rakanaka uye rakasimba kuti arambe akatakura makuru mavhidhiyo emavhidhiyo kuitira kuti munhu wese muLinux agogona kuanakidzwa.
Unotoziva kuti F1 2017 ndiwo mutambo wepamutemo wemutambo uyu uye kubvira Mbudzi 2 Unogona kuitenga kubva kuchitoro chiutsi uye zvakare kubva kune avo Feral Chitoro. Mutengo unozove € 54,99 inokodzera chaizvo kune izvo zvinonakidza mutambo uyu unosanganisira. Kunze kwekushanda zvakanakisa pamifananidzo iyo yakanyatsoitwa, ivo vakaita basa rakanakisa maererano neAI uye manzwiro ekutyaira mota chaiyo, zvakanyanya kupfuura mutambo wemujaho wevhidhiyo ungangoita simulator.
Uye zvakare, zvemukati zvinonakidza izvo zvaive zvisingawanikwe mukuburitswa kwakapfuura zvakabatanidzwa, senge zvekare F1 mota pakati padzo pane mota dzinozivikanwa kubva kuRenault, Ferrari, McLaren, Red Bull, naWilliams vakakunda makwikwi munguva yakapfuura. Naizvozvo, iwe haugone chete kutyaira mota dzemwaka uno, asi zvakare tyaira aya enhoroondo zvishongo, zvese zvinopesana nemutambo wega AI uye nekurwisa vamwe vatambi nekutenda kune yayo yakavandudzwa multiplayer maitiro.
Ivo zvakare vakaverengerwa modes senge Mukwikwidzi uye mhando nyowani yemutambo kwauchazofanira kuratidza hunyanzvi hwekutyaira Dzimwe nzira dzinoverengerwa mukuwedzera kune makumi maviri maseketi epamutemo emakwikwi aripo, chimwe chinhu chakanakisa kuchinja zvishoma. Pasina kupokana, iyo yakazara conglomerate yezvinokwezva zvevateveri ve motorsport uye F20 kunyanya ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » YEMAHARA: F1 2017 nyika paGNU / Linux muna Mbudzi 2
Chokwadi ndechekuti kubva pane yangu maonero mutambo wegore muLinux. Uye zvakare, mutambo uchashanda neVulkan API seyakajairwa. Handizive kana ichigona kuridzwa muOpenGL yekuenzanisa, asi iko kushandiswa kweiyo yekutanga inhau dzakanaka. Ngatione kana nazvo vanogona kusvina zvishoma kuita kubva kumutambo.
Nhanho nhanho, asi pasina kumbomira. Isu tatova nerimwe zita hombe reLinux.
Maitiro ekugadzira bootable usb kubva kune iyo terminal mune chero kupi kugovera